Padmavati oo dhibaato horleh bartanka ka galay, maxaase ka jira in burcadda Internet-ku ay dheceen filimka Deepika Padukone iyi Ranveer Singh? | Filimside.net
Home » Bollywood News » Padmavati oo dhibaato horleh bartanka ka galay, maxaase ka jira in burcadda Internet-ku ay dheceen filimka Deepika Padukone iyi Ranveer Singh?
Padmavati oo dhibaato horleh bartanka ka galay, maxaase ka jira in burcadda Internet-ku ay dheceen filimka Deepika Padukone iyi Ranveer Singh?
Filimka taariikhda ka hadlaya ee Director Sanjay Leela Bhansali ee Padmavati ayaa wuxuu bartanka ka galay dhibaato horleh, iyadoo wararku ay sheegayaan in burcadda Internet-ku ay dhaceen filimkaan ay hogaamiyaha ka yihiin Deepika Padukone iyi Ranveer Singh, Online-ka ayaana lasoo dhigay filimkaan.
Tani waxay ka dhigan tahay in filimka Padmavati uu Box Office-ka ku guuldarreysan karo marka ugu dambeyn tiyaatarrada la saaro, iyadoo dib loo dhigay waqtigii lagu ballansanaa in filimkaan la daawado.
Kuna sii darso filimka Deepika Padukone iyi Ranveer Singh ayaan laga daawan doonin gobollo badan oo India ka mid ah ka dib markii ay qaadaceen Xisbiga Garabka Midig ee Hindiya Rajput Karni Sena.
Guddiga aflaanta Bollywood faafreebaan ee Central Board of Film Certification (CBFC) ayaan sidoo kale weli shahaado siinin filimkaan.
Galabtana waxaa mareegaha YouTube lasoo geliyey muuqaallo lagu sheegay inay ka qeyb yihiin filimka Padmavati.
Inkastoo uu muuqaalladaani ay heleen dad badan oo share-gareeyey, hadana waxaa la sheegay inuu yahay kuwo been abuur ah (Fake videos), markii ay shabakadda Hindustan Times xiriir la sameysay kooxda filimkaan iska leh.
Laakiin boqolkiiba 100 lama aaminsana inay muuqaalladaani been abuur yihiin, oo waxbaa ka jira ayey leeyihiin warbaahinta India. Waxaana laga shaki qabaa in muuqaalladaan laga dhacay kooxda farsamada filimka Padmavati.
Warar dheeraad ah oo ku saabsan xaqiiqada muuqaalladaan waan idiin soo gubdin doonaa.
Waxaa Aqrisay 673